I-infographic kunye neNtetho: Ukuvela kweNtengiso yeDijithali | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 3, 2012 NgoLwesibini, Oktobha 2, 2012 Douglas Karr
Wow… jonga ukuba sihambe kangakanani! Njengomntu omdala, kuyaphazamisa ukujonga imbali yayo nantoni na kwaye wazi ukuba bendisebenza kwinqanaba ngalinye lalo luvela!
Ukuhamba ngeProllroll: Ukuvela kweNtengiso yeDijithali. Imikhwa eshishinayo yentengiso yedijithali iguqukayo kule minyaka ingama-30 idlulileyo kwaye ayizukuqhubeka nje ngokuvela, kodwa iya kuguquka ngokukhawuleza okukhulu. Xa sijonga ngasemva, siye sazibonela ngawethu iindlela zedijithali ezivela ngqo kwimigca yonxibelelwano phakathi kweemveliso kunye nabasebenzisi abasebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ekusetyenzisweni kwentengiso kumaqonga avelayo anje ngeefowuni eziphathwayo kunye nezixhobo zethebhulethi, ekonyusa ukusetyenziswa kwexesha lophawu ngokusebenzisa izinto ezinonxibelelwano ezisebenzayo bonisa iintengiso.
Ngaba oopopayi kwii-imeyile bayasebenza ngokwenene?